कोरोनालाई सामान्य नठानौं, होम आइसोलेसनमा यसरी लिँदैछ ज्यान : डा. अनुप बास्तोला – Health Post Nepal
कोरोनालाई सामान्य नठानौं, होम आइसोलेसनमा यसरी लिँदैछ ज्यान : डा. अनुप बास्तोला
२०७७ मंसिर ३ गते ७:५३
भाइटीकाको राति १० बजे एउटा फोन आयो। उहाँ ४०-४५ वर्षको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। कोरोनाको लक्षण छ। अवस्था एकदमै जटिल थियो। एम्बुलेन्स पाइँदैन, बिरामी कसरी ल्याउनु?
मैले पिसिआर गराइसक्नु भयो भनेर सोधेँ, उहाँहरूले छैन भन्नू भयो। जुनसुकै सवारी साधन खोजेर तत्काल अस्पताल ल्याउनोस् भनेँ।
मलाई लाग्यो, बिरामी अस्पताल पुग्नु हुनेछ। तर, दुर्भाग्य, डेढ घण्टापछि फोन आयो, बिरामी बित्नु भयो। सायद समयमै अस्पताल आइपुग्नु भएको भए बिरामीलाई बचाउन सकिन्थ्यो कि? अल्पायुमै जीवन गुमाएका मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
यो घटनाले अहिले होम आइसोलसनमा लापरबाही र कोरोना परीक्षण नगरी दुई-चार दिनपछि यसै ठीक भइहाल्छ नि भन्ने आम मानसिकताको उजागर गर्छ। कोरोनाको लक्षण कसैलाई सामान्य हुन सक्छ, तर यसले धेरैको ज्यान लिइसक्यो।
बेवास्था र लापरबाहीले प्राण जोखिममा राख्ने काम कसैले नगरौं। लक्षण देखिएपछि कम्तीमा पिसिआर गराइहालौं। अनि स्वासप्रस्वासमा समस्या आउनासाथ अस्पताल लगिहालौं। गाह्रो पर्नासाथ एम्बुलेन्स वा अन्य सवारी साधनको तत्काल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सतर्क बनौं।
कुन अस्पताल लैजाने भन्नेबारे जानकारी राखेर बसौं। पिसिआर गरे बेकारमा १४-१५ दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने सोचले धेरैले कोरोना संक्रमणलाई हलुका रूपमा लिएको पाइन्छ। यो गल्ती गर्दै नगरौं। तपाईंको जीवनभन्दा ठूलो १४-१५ दिनको आइसोलेसन होइन।
लक्षण देखिएकालाई सरकारले पिसिआर टेस्ट नि:शुल्क गरिसकेको छ। त्यसैले कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिए टेस्ट गर्न ढिला नगरौं। कोरोना पोजिटिभ भएकाले कम्तिमा आफूलाई स्वासप्रस्वासमा अफ्ठ्यारो महसुस भए तुरुन्त परिवार-साथीभाई वा चिकित्सकलाई भनीहालौं।
यो जाडोको मौसममा कोरोना भाइरसको फैलावट व्यापक हुन सक्छ। त्यसैले कृपया पटक्कै लापरबाही नगरौं, मास्क लगाऊँ, हात धोऊँ/स्यानिटाइज गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं।
थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १३ निको भए
गुल्मीको चन्द्रकोट तथा छत्रकोट गाउँपालिकाको निर्णय: स्वास्थ्य बिमामा छुटदेखि एम्बुलेन्स खरिदसम्म